“Qeerroon Amboo waadaa waliif galan.Kana booda Tokkummaan waliin hojjechuuf qeerron Amboo universty – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Qeerroon Amboo waadaa waliif galan.Kana booda Tokkummaan waliin hojjechuuf qeerron Amboo universty
“Qeerroon Amboo waadaa waliif galan: Kana booda Tokkummaan waliin hojjechuuf qeerron Amboo universty Amboo tti walga’ii Guyyaa sanbata kaleessaa ta’een waadaa waliif galee jira.
Qeerron Amboo warreen bu’aa fi aangoo opdo irraa argachuuf jecha qeerroo addaan qoodaa turuun isaani ni yaadatama.
Kana booda Qeerroon Amboo walqoqqooduun ture hafee Tokkummaa calqabamee tureen Gaaddisa Abbaa Gadaa maccaa Taakkalaa Dhinsaa jalatti ajajamuun “Dantaa waan waloo oromoo ” irratti waliin hojjechuuf waadaan galameera.
Qabsoon qeerroo waanti injifannoo Olaanaa irraa gaheef
# ilmaan oromoo Amntaa ,Laga fi Dhaaba siyaasaa tiin otoo addaan hin qoodiin Tokkummaan bilisummaa oromoo qofaaf qabsa’eefi.
# Dhaaba siyaasaa tokko qofa jala gallee garaa garummaa dhaabolee siyaasa oromoo keessa jiru ittuu daran addaan faca’uun akka hin ammaanne Qeerroon of eeggannoo waan gochaa tureefi.
Qeerron keenyas dhuunfaan dhaaba fedhe deeggaruun mirga isaati.Garuu Tokkummaa qeerroo Gara Dhaaba siyaasaa tokko qofa jalatti akka hiriiran gochuu irraa of eeggachuu qabna.
Qeerroon dhugaan bilisummaa dhugaaf qabsa’uu eenyu akka deeggaruu qabu ni beeka.
Qobaa kaachuun oromoof diigamuu fi umna dhorkuu malee faayidaan oromoof qabu hin jiru.Kufaatii qofa nuuf fide.Kan darbee irraa muuxannoo fudhanne jirra .
Haraarri dhaabbolee siyaasa oromoo jidduutti akka gaggeeffamu Hayyoota ,Abbooti Gadaa Qeerroowwan fi maanguddootaan walitti haraarsuuf sochiin eegalamee akka jiru ni beekama.
Murtiin irra gahamu sun ummata oromoo biratti seena qabeessaa fi hunda biratti fudhatama akka qabu ni eegama.
Dhaabni siyaasaa murtii sana hin fudhanne kana booda oromoo biratti fudhatama hin qabu.
Kana booda maqaa oromoo lafa kaa’ee maqaa biraa moggafatee ittiin daldaaluu ni danda’a.
Ammas Qeerroon Amboo Dhaabboleen siyaasa oromoo saffisaan gara 1ykn 2 tti walitti dhufuun Dursa murtee qeerroo fi ummanni murteeffatee dhagayuun “ilmaan oromoo Tokkummaa ” Amma Qeerroon fiddee jirtu kana akka gara Fuula duratti deemsisan oromoon marti ni awwu.Falli biraas hin jiru.Kun yaroo ammaa ijjannoo oromoo maraati.
Nutis Qerroon murtee haraaraa Dhaaba siyaasa oromoo 1 ykn 2 tti fiduun Hayyoonni,Abbooti Gadaa ,Qeerroowwan fi maanguddoonni muteessan fudhachuun Daabbolee kana deeggaruun Tokkummaan dhaabbannee injifannoo arganne eeggachaa yaroo dhumaaf bilisummaa dhugaan ni geenya.
Abbaan oromiyaas oromoo ta’uu mirkaneesinee oromiyaa walaba taate hundeesuun feenu Federalism dhugaan,Feenu kana Biraan akka ta’uu oromootu murteeffata.
Hanga Tokkummaan oromoo jirutti Abdan sodaa diinaa tokkollee hin qabnu.
Injifannoon ilmaan oromoo tiif haa ta’uu !!!
Qeerroo Amboo irraa !”